Induction ethe nkqo kumgangatho kunye ne-bulkhead Izisombululo zokufudumeza amaxesha ngeepesenti ezingama-80 xa kuthelekiswa nezinye iindlela. Ukulungiswa kwe-induction kulunge ngakumbi ekugcineni iipropathi zetsimbi. Ikwayindlela ekhuselekileyo, esempilweni, kunye nendlela ethembekileyo yokusingqongileyo ekhoyo.
Indlela yesiko esetyenzisiweyo kwesi sicelo ilangatye ledangatye. Ukulungiselela le nto, umqhubi wezakhono uzinikezele ukubonelela ubushushu kwiindawo ezithile, kulandela iphethini yokufudumeza, emisela ukunciphisa ukuphazamiseka kulwakhiwo lwesinyithi.
Okwangoku le nkqubo yokulungisa ineendleko eziphezulu kuba ifuna isixa esikhulu sabasebenzi abanezakhono, iingozi eziphezulu kwindawo yokusebenza, ukungcoliseka kwendawo yokusebenza kunye nokusetyenziswa kwamandla aphezulu.
Ngexesha lokudibanisa iipleyiti kulwakhiwo olungagungqiyo, kuveliswa uxinzelelo. Ukuphelisa oku kugqwethwa, kusetyenziswa iindlela ezahlukeneyo zemveli kunye neendlela zokulungisa i-bulkhead: ukuwelda ubuhlalu kwiindawo ezingabonakaliyo, ukusika nokuphinda -welda iipleyiti, kunye noxinzelelo lokunciphisa ukufudumeza idangatye. Obu buchule ngabathengi bexesha elikhulu, babiza imali eninzi kwaye ababoneleli ngexabiso elongeziweyo. Ukuphucula ukusebenza kwale nkqubo kubaluleke kakhulu.
Isisombululo se-HLQ sokuQinisa okuQinisekayo sinikezela ngendlela elula, eguqukayo, yolondolozo olusezantsi kumgangatho wesiko kunye neendlela zobuchule bokulungisa. Inkqubo eshushu necocekileyo yokufudumeza engenisa ngokukhawuleza yenza ubushushu ngokuchanekileyo ukukhulula uxinzelelo kunye nokulungisa ipleyiti.
Induction Uyilo olushushu lobushushu
Inkqubo yokufudumeza i-HLQ yoLungiso lweNkqubo igcinwe kuyo yonke into inye, isikhongozeli esiphathekayo. Isikhongozeli sibekwe kwindawo yokuxhasa; iilebolts zibonelelwa ngokuhamba ngokulula.
Ukuma ngokuthe nkqo okanye nkqo
Ngotshintsho nje lwezixhobo, izixhobo zinokusetyenziselwa indawo ethe tyaba okanye ethe nkqo. Inkqubo inokubekwa kwindawo ethe tyaba kunye ethambekileyo.
I-HLQ Inkqubo yokufudumeza ethe nkqo yenzelwe imeko zolwandle kwaye ihlangabezana nazo zombini iimfuno ze-IP55 kunye ne-AISI1316. Ikhabhinethi yenziwe ngentsimbi engenasici kwaye inkqubo yoqheliso ayifuni zinto zinokuchitheka.
Abaqhubi beenkqubo banokuqonda la manyathelo mathathu asisiseko ngeeyure nje ezimbalwa zoqeqesho.
Ukukhethwa kwenkqubo ngokusekelwe ubukhulu ipleyiti. Inkqubo iphatha amacwecwe esinyithi ngobunzima be-4 ukuya kwi-20mm, kunye neepleyiti zealuminium ezinobunzima be-3 ukuya kwi-6 mm.
Beka inductor kwisixhobo sokufudumeza, ngokuthe nkqo okanye nkqo ngokuthe nkqo, kwindawo efunwayo
Cinezela isiqalo sokuqala ukuqala inkqubo. Itekhnoloji yokungenisa ehambele phambili ivelisa ubushushu obufunekayo ngokukhawuleza, ngaphandle kokugqitha kubushushu beCurie.
Yintoni ukuqondiswa kwe-induction?
Ukulungiswa kwe-induction kusetyenziswa ikhoyili ukuvelisa ubushushu bendawo kwindawo echazwe kwangaphambili yokufudumeza. Njengokuba le mimandla ipholile, ziyavumelana, "zitsala" isinyithi kwimeko ethambileyo.
Ukutshisa ukutshisa isetyenziswa ngokubanzi ukulungisa imikhombe kunye neenqanawa ezinkulu. Kwishishini lokwakha lilungisa imiqadi. Ukulungiswa kwe-induction kukonyuka-kusetyenziselwa ukwenziwa kunye nokulungiswa kwee-locomotives, ukuqengqeleka kwesitokhwe kunye nezithuthi zempahla enzima.
Ukulungiswa kwe-induction kukhawuleza kakhulu. Xa silungisa iinqanawa zenqanawa kunye neenqwelomoya, abathengi bethu bahlala bexela ubuncinci be-50% yexesha lokonga xa kuthelekiswa neendlela zesiko. Ngaphandle kokungeniswa, ukolula inqanawa enkulu ngokulula kunokusebenzisa amashumi amawaka eeyure zomntu. Ukuchaneka kokungeniswa kukonyusa imveliso. Umzekelo, xa usolula i-chassis yeloli, akukho mfuneko yokususa izinto ezinobushushu. Ukwenziwa ngokuchanekileyo kushiya izinto ezikufutshane zingachaphazeleki.
Induction ethe nkqo iinzuzo zokufudumeza
Ukutshintshwa kwedangatye elitshangayo ngendlela yoqheliso kunezi zinto zilandelayo:
Ukuncitshiswa kwexesha elibalulekileyo ekusebenzeni ngokuthe nkqo
Ukuphindaphinda kunye nomgangatho wokufudumeza
Umgangatho ophuculweyo wendawo yokusebenza (akukho mafutha ayingozi)
Ukuphuculwa kokhuseleko lwabasebenzi
Amandla kunye nokonga iindleko zabasebenzi
Amashishini ahambelana noko kukwakha iinqanawa, uloliwe kunye nolwakhiwo lwentsimbi kulwakhiwo phakathi kwabanye.
iindidi Teknoloji tags Ukulungisa i-bulkhead, Uqheliso lwe-bulkhead ethe nkqo, ukungenisa ngokuthe nkqo, induction ethe nkqo kumgangatho, Induction ethe nkqo isifudumezi, Umatshini wolungiso olwenziweyo, inkqubo yokulungisa induction, Induction Isisombululo esiLungileyo, inkqubo yokunyanzeliswa, Yolula iidesika zenqanawa, Yolula iinqanawa zokungeniswa, kumgangatho wokulungisa, Umgangatho wokulungisa kunye ne-bulkhead, Yintoni i-induction straightening Post yokukhangela